Usuku lwaBantwana noLutsha loSuku. 6 ukufundela ukubhiyozela | Uncwadi lwangoku
Ukuhambelana nomhla we kuzalwa ukusuka kumbhali waseDenmark UHans Christian Andersen, namhlanje kubhiyozelwa ngomhla Usuku lwaMazwe ngaMazwe lwaBantwana noLutsha. Yima ke khuthaza ukufunda kancinci phakathi komncinci endlini, ndibakhetha aba Izihloko ezi-6 zemixholo eyahlukeneyo kunye nemisebenzi ukuze ube nexesha elimnandi.
1 Kwilizwe liphela likaSherlock Holmes
1.0.1 Ukusuka kuHlelo lweLarousse
2 Masidlale iyoga kusasa
3 100% yezilwanyana
4 I-Ninja Kid 1-Ukusuka kwi-Strips ukuya kwi-Ninja
4.1 Anh yenza
5 Kukho ipirate kwi-intanethi
5.0.1 Uthotho lweGeronimo Stilton
6 Umyezo ofihlakeleyo
6.0.1 UFrances Hodgson Burnett
Kwilizwe liphela likaSherlock Holmes
Ukusuka kuHlelo lweLarousse
Un uqhakamshelwano lokuqala yabancinci kumfanekiso wabalinganiswa abaziwayo boncwadi. Sifumene umcuphi waselondon USherlock Holmes, umhlobo wakhe ongenakwahlukaniswa, ugqirha John Watson, kunye nenja yakhe uToby. Ngokudibeneyo kufuneka basombulule amatyala ambalwa kwaye zama ukubamba olona tshaba lwakhe lubi, uprofesa okhohlakeleyo I-Moriarty, Ebalekayo kaninzi.
Kodwa ukuze bayifumane kuya kufuneka Hamba ngeenxa zonke kwihlabathi ukuleqa kwaye ufuna uncedo lokusombulula Amaqhina angama-80 Zonke iintlobo zezinto abazicebisayo kubafundi: phakathi kwazo kukho imidlalo yokubala, amagama anqamlezileyo, ikwenze, iikhowudi eziyimfihlo kunye nemidlalo yokujonga.
Masidlale iyoga kusasa
Ngemibhalo evela kuLorena I-Pajalunga e imizekeliso ye UAnna Láng, Kule ncwadi kukho ifayile ye- uqhakamshelwano lokuqala neyoga ezincinane. Kuyo, ukwakheka kunye neentshukumo ezijolise ikakhulu kubantwana abakhutheleyo ziyaqhelaniswa nokuzilolonga kuya kubanceda ukuba bawahambise la mandla ngendlela eyakuthi kwangaxeshanye ibanike noxolo lwengqondo kunye nokuzithemba. Phambi kokuba kubekho ibali elifutshane lentshayelelo kuyo nganye iimeko ezilishumi elinesithandathu ezilula ezichazwe zacaciswa inyathelo ngenyathelo.
Isicatshulwa sivela URita Mabel Schiavo kunye nemifanekiso U-Isabella Grott.
Le yincwadi ye ukwazisa izilwanyana ezininzi, ngokukodwa ukuba unokubabonisa nge Ubungakanani obufanayo banayo enyanisweni. Ke ungabona ngenene i-hummingbirds okanye izinambuzane zokwenyani, kwaye uthelekise ubungakanani obahlukeneyo bamaqanda ezilwanyana ezahlukeneyo, amazinyo abo, iilwimi, imisila, amehlo ... ngaxeshanye bafunda curiosities malunga nabo.
I-Ninja Kid 1-Ukusuka kwi-Strips ukuya kwi-Ninja
Le ncwadi isixelela ngebali Nelson, umntwana ongalinganiyo apho akhoyo, onganxibi mpahla zintle kwaye onedumela Kancinci kancinci. Kodwa isimanga siza ngomhla ojika ishumi kuba ufumanise ukuba uyinja ninjaNgokukodwa, i-ninja yokugqibela emhlabeni. Ke enkosi kukuyilwa kwakhe Umakhulu y Kenny, umzala wakhe ophambeneyo, uNelson uya kubuphucula ubuchule bakhe njenge ninja ukuya gcina isixeko sakho.
Kukho ipirate kwi-intanethi
Uthotho lweGeronimo Stilton
Isihloko esitsha kolu qoqo ludumileyo oluneenkqantosi ngokuqinisekileyo ezona zidumileyo kwimibhalo yabantwana. Umntu othile isazisi sakho sibiwe kwi-intanethi kwaye uzenza ngathi nguGeronimo Stilton. Ke eyokwenyani iGeronimo ifumana izinto ezininzi ezithengiweyo kwiNet ngekhadi lakhe lekhredithi. UGeronimo ugqiba kwelokuba afowune Doc, umhlobo wakhe ingcali yekhompyuter, ukukunceda uveze umkhohlisi.
UFrances Hodgson Burnett
Kuqala ukupapashwa ngo 1911, wajika umbhali wayo waba ngumbhali odumileyo ogqwesileyo kuncwadi lwabantwana. Ukusukela ngoko yi yakudala kuyo yonke iminyaka oko kwaqhubeka kwisizukulwana ngesizukulwana.
Xa ibali le UMary Lennox, enye ulilolo ntombazana Akukho mntu umthandayo kwaye uvela eIndiya azohlala nomalume wakhe Yorkshire, ENgilani. Apho uMary akanakwenza okungaphezulu kokujonga le ndlu inkulu inesidima kwaye ahambahambe kuyo. Kodwa ngenye intsasa ukufumanisa ukungena kwegadi efihlakeleyo, zifihlwe emva kweendonga ezigqunywe ngeivy.
Emva koko uMariya ugqiba kwelokuba ufuna ukubuyisela kuloo gadi uzuko olwalunalo ngaphambili. Ngale nto uzakufumana uncedo lwe Dickon, inkwenkwe evela kwi-moor eyaziyo ukuthetha nezilwanyana, kwaye umzala wakhe uColin Uya kufunda enye indlela yokunxibelelana ukongeza kunandipha ukunxibelelana nendalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Iincwadi zoLutsha » Usuku lwaBantwana noLutsha loSuku. 6 ukufundelwa ukubhiyozela
Ingxelo yeNkcazo yeLos Ojos Con Mucha Noche, nguEmilio Calderón